SOO SAARKA ARMAHA SOO SAARAYAASHA IYO SOO SAARAYAASHA - Shiinaha Warshadaha KONTOROOLKA
Gacanta Xakamaynta Abaalmarinta Hoose ee BENZ-Z5130
MAXAY MUHIIM U Yihiin CIIDAMADA KONTOROOLKA? Hubka xakamaynta ayaa bixiya iskuxirid iyo barta udub dhexaad u ah hakinta gaarigaaga iyo jiiskaaga. Caadi ahaan ku xirida istiraatiijiga istiraatiijiga ah qaabdhismeedka jirka, xakamaynta gacmaha isugeynta kubbadaha iyo bushings kuwaas oo ka shaqeeya tandem si loo ilaaliyo raadinta gawaarida saxda ah iyo booska. Tusaale ahaan, gacanta xakamaynta hoose waxay gacan ka geysaneysaa dejinta booska dhererka iyo dhinaca dambe ee giraangirta inta uu gaariga socdo. Xakamaynta hubka waxay iska caabbisaa xoogag badan oo rar ah, sida ...
Hubka Xakamaynta Dib-u-hagaajinta ee loogu talagalay Audi - Z5137
Gacanta kontoroolka waxay isku uruurisaa isku-xirnaanta kubbadda iyo ku duubidda jirka xoogga sare leh. Qaybta wadajirka ah ee kubbadda ayaa si dabacsan ula falgalaya iyadoo lagu xirayo jilbaha lagu qalabeeyo qaybo kala duwan oo ganaax ah iyo giraangir. Bushingka cinjirka ah wuxuu si ammaan ah u hagaajiyaa jirka gaariga iyo gacanta xakamaynta wuxuuna qaadaa shoog. Body Awood Awood leh Waxay leedahay gacan gacan qabasho xoog leh oo ku taageeri karta qaybaha ka joojinta iyada oo loo marayo xaashi adag oo bir ah oo adag oo duudduuban iyo walxo been abuur ah oo aluminium ah oo been abuur ah. Treatment Daaweynta Dusha sare ee Tangrui wuxuu leeyahay eleTangru ...
Bidixda Jihada Hore ee Gacanta Gacanta Oem Wixii Pilot Honda -Z5133
Waa maxay hubka gacanta lagu hayaa? Xakameynta hubka, mararka qaarkood loo yaqaan "A Arm", waa xudunta nidaamka ganaaxa hore. Erayada fudud, gacmaha xakamaynta ayaa ah isku xirka giraangirahaaga hore iyo gaarigaaga. Mid ka mid ah dhamaadka wuxuu ku xiraa gawaarida gawaarida dhamaadka kale wuxuu ku xiraa qaabka gaarigaaga. Gacanta koontaroolka kore waxay ku xiran tahay aagga ugu sarreeya ee gawaarida hore iyo gacanta hoose waxay ku xiran tahay qaybta ugu hooseysa ee gawaarida hore, iyadoo labada gacmoodba ay ku dheggan yihiin jiritaanka ca ...
Aluminium Nooca Cusub ee Xakamaynta Hore ee Audi-Z5139
Tangrui Oem Front Control Arm For Porsche-Z5140
6L8Z-30-78AA Iyo YL823078AA Hub Hubinta KUGA-Z5142
U leexo Tangrui isteerinka & hakinta. Gacantayada xakamaynta iyo hubka xakamaynta raadraaca ayaa ah heshiiska dhabta ah. Maaddaama ay tahay cunsur muhiim u ah naqshadeynta gawaarida iyo qayb muhiim ah oo ka mid ah nidaamka ka joojinta, waa inaad doorataa gacanta OE ee xakamaynta tayada. Taasi waa sababta aad ugu jeesan karto Tangrui oo loogu talagalay isteerinka lagu hago iyo qaybaha hakinta. Maxaad ugu kalsoon tahay Tangrui hubka xakamaynta? Gacmaheena xakamaynta ayaa maraya 100% ogaanshaha dildilaaca iyo baaritaanka cilladaha ultrasonic si loo hubiyo in qalabku u dhigmo OE ...
OEM TD11-34-300B iyo TD11-34-350B ARIMAHA KONTOROOLKA Mazda -Z5146
OEM 30639780 iyo 30639781 ARIMAHA KONTOROOLKA EE VOLVO -Z5148
Hubka Xakamaynta Tayada Sare OEM 54500-3S000 Wixii HYUNDAI SONATA-Z5149
Hubka Xakamaynta Sare ee Sare ee Loogu Haboon Yahay Audi-Z5138
Tangrui Kumbuyuutarka Kumbuyuutarka ee Gacan ku habboon ee loogu talagalay Ford-Z5141
Naqshadeynta Faahfaahinta Hubka Fudud ee Ku habboon Honda - Z5143
Naxdinta Nuugista Bolt, Naxdinta Rubber Rubber, Jabinta Steering Front, Hood Shooga Nuugista, Gawaarida Hub, Wadajirka Kubadda Tire,